Thola umsebenzi ekhaya nge-intanethi ... Namuhla, lolu hlobo lwemali engenayo umuntu olumangalisa kunzima. Ukusebenza nge-intanethi kunezinzuzo eziningi nezinzuzo eziningi. Lokhu kuwukuchitha isikhathi sakho, imisebenzi yokuzihlela, amahora angasebenzi okungajwayelekile, amathuba okusebenza ekhaya, emgwaqweni noma ezokuthutha, ukuthola umholo ngokuthanda: usuku nosuku noma kanye ngenyanga, izindlela ezihlukahlukene zokuthola. Futhi izinhlobo eziningi zokuthola imali nge-intanethi ziningi kakhulu. Cabanga ngezindlela ezithandwa kakhulu nezindlela ezintsha zokuthola kwi-intanethi kusihloko sethu samanje!
Ungakwazi, ngokwesibonelo, ukudala iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ngokubeka izixhumanisi zokukhangisa nama-banner kuso. Ngako-ke, lapho bekhona khona isayithi noma ibhulogi, inzuzo eyengeziwe iyokwazi ukuletha. Ungaba umhlanganyeli ocwaningweni, umhleli, umphathi wokuqukethwe, i-poster (lo muntu obeka inombolo ethile yokuthunyelwe kumaforamu), basebenze nabanikeli beposi, bathengise izixhumanisi, babhale izihloko, badale amawebusayithi, ukukhangisa kwesikhashana nabanye abaningi. Iminye imisebenzi idinga ukutshalwa kwezimali okuqala, kodwa ungenza ngaphandle kwabo. Indlela elula yokwenza lokhu ngokuba i-freelancer. Kumasevisi ama-freelancers resort, ikakhulukazi ezimweni ezintathu. Izinhlangano zephrojekthi enkulu yesikhathi esisodwa zidinga iqembu labachwepheshe abalungele ukwenza umsebenzi ngesikhathi esivunyelwene ngaso. Isimo sesibili yilapho izinhlangano ngezikhathi ezithile kufanele zisebenze ezinkonzweni zesazi kunoma iyiphi insimu. Kulesi simo abanikeli bamahhala baba ama-freelancers. Bangathembela ekubambisaneni kwesikhathi eside futhi, njengomthetho, ngaphandle kokuqamba inkontileka yomsebenzi. Futhi, ekugcineni, kohlobo lwesithathu kukhona ama-freelancers athengisa imisebenzi eyenziwe ngomumo. Kulokhu, abathengi ngokuvamile baba abaxhumanisi.
I-Freelance (FREELANCE) ifaka izinsiza eziningi: ukucubungula isithombe, ukudala ama-logos, amabhanela, amawebhusayithi, izihloko zokubhala, ukuklama, ukuhlela, ukudweba imibingelelo nokudweba amakhadikhadi, ukuphatha, ukuhumusha nokuhlanganiswa kwamadokhumenti, ukumaketha, ukusungula izilogi namagama kanye m.
Njengomthetho, amawebhusayithi akhethekile asiza ukuthola ikhasimende le-freelancer. Baxhumana nomqashi ongasebenzisa umqashi, ukuxoxisana ngemigomo yereferensi, imigomo, izindleko nemininingwane. Futhi kumasayithi anjalo kungenzeka ukuxhumana nabantu abazimele. Ngakho abaqalayo bangafunda noma yimaphi ama-nuances, ubuqili lapho benza imisebenzi evela kubaqeqeshi abanobuchwepheshe obunzima. Uma, isibonelo, uhlelo, ukuklama, ukuphatha nokudala ama-logos kudinga ulwazi, ukuqeqeshwa namakhono ochwepheshe, noma ubani ofisa angenza lolu hlobo lomsebenzi, njengokubhala izihloko.
Ukubhala umbhalo kungenye yezindlela ezithandwa kakhulu zokuthola i-Intanethi. Izidingo zomkopishi zincane kakhulu: ukufunda nokubhala kanye nokukwazi ukubamba nokugcina ukunakekelwa kwabafundi. Kule nsimu yomsebenzi, kuhlale kunethuba lokuzibonakalisa kumuntu omusha, njengoba ama-athikili ayadingeki kuphela ukushicilelwa kwezincwadi, kodwa futhi nenani elikhulu lezingosi ezihlukahlukene ezidinga ukwengeza okuqukethwe kwazo ngolwazi olusha, oluthakazelisayo kubasebenzisi nsuku zonke ukulondoloza nokwandisa ukuthandwa kwabo. Abenzi kule niche yemali engenayo nge-Intanethi bahlukaniswe ngabakopisha, abhala kabusha, abakhophi be-SEO-copywriters nabalobi bokuqala. Ababhalisi bhala imibhalo lapho izikhangiso zivame ukuveza ngokucacile noma zikhona ngokugcwele. Babhala izihloko ngokusekelwe ekuhlangenwe nakho kwabo.
Ababhali abhala kabusha , uma bebhala imibhalo, thatha ezinye izihloko zabantu futhi, ubaguqule, bathole okuyingqayizivele futhi abayingqayizivele ekuphumeni. Lokhu kwenziwa ngokuhlela kabusha imisho, esikhundleni samagama ngamazwi okufana, kodwa njalo ngokulondolozwa kwencazelo ejwayelekile yalezi zihloko. Abakwa-SEO-copywriters bahlanganyela ekudaleni izihloko lapho isayithi elithile likhangiswa khona. Kukhona imithetho nemibandela ethile yokubhala leyo mibhalo.
Futhi, ekugcineni, abalobi bokuqala. Laba ngabantu abachaza imizwa yabo nemizwa yabo. Ezihlokweni zabo akukho ukukhangisa kunoma yikuphi ukubonakaliswa kwayo. Njengomthetho, abalobi bokuqala basebenamabhalane asebenzayo noma abashadi.
Njenganoma yiluphi uhlobo lokuthola imali, ukusebenza nge-Inthanethi kunamaphutha amaningi. Lokhu kungabikho kwemali engenayo engapheli (ikakhulukazi yabaqalayo), kanye nengozi yokukhohliswa abaqashi abangenacala. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kunezinhlanganisela eziningi, ngoba abaqalayo ngokushesha noma kamuva bathola ulwazi kanye negama, ezimweni ezimbi kakhulu - zizame kolunye udaba. Ngokuqondene nesipiliyoni sesibili, kunezindlela eziningi zokunciphisa ubungozi bokukhwabanisa okungenani. Njengendlela yokukhetha - ukubhala inkontileka noma ukwenza umsebenzi emva kokukhokhelwa kuqala. Ngokuvamile umuntu oye waba yi-freelancer akavamile ukuba yilungu labasebenzi. Kakhulu kakhulu ukujwayela inkululeko. Ukuze uthole umsebenzi nge-intanethi ekhaya unikezwa kumuntu kalula, omunye umuntu akawamukeli lolu hlobo lomsebenzi, akubheke ukuthi aluphephile. Kuwe ukuthi unqume, kodwa ungazama, ngoba kunezindlela ezintsha zokuthola imali ku-intanethi ngalokhu!
Ukukhipha isikweletu kanye nebhange
Yini ongayenza imali enkingeni
Ikesi yokusiza lokuqala ehhovisi: ukuhlinzeka konke
Kungcono kanjani ukusebenzela owesifazane?
Ngashiya umsebenzi wami waba umama wendlu
Ngidinga ukuba nemfundo ephakeme namhlanje?
I-cramps yemvelo ehlukile emntwaneni
Dumplings ezinobuhle ezinezikhumba
Ungakugwema kanjani ukunyuka ngokweqile ngesikhathi sokukhulelwa kwesibili?
Lezi zibonakaliso ze-zodiac zizocebisa esikhathini esizayo esiseduze ngokusho kwenkanyezi
I-Pineapple Pie engaphenduliwe nge-Cranberries
Ibonisa i-Oscar de la Renta ngeSonto leMidlalo eNew York
Isaladi nobhontshisi nesibindi
Ukwelashwa kwamakhaza ezindebeni ngezilonda zabantu
Sandwich nge isoseji ne-jalapeno
Izinkolelo nezindabuko zamaSlav ngezinwele
Ikhekhe "I-Vanka curly"
Amapilishi amane abomvu abilisiwe, izingane zondliwa